Heshiis hoosaad Trump iyo Kim Jong Un aan hore loo ogeyn oo soo shaacbaxay iyo halis cusub – Radio Daljir
Agoosto 30, 2018 5:48 g 0
In kasta oo Madaxweyne Donald Trump iyo Hoggaamiye Kim Jogn Un aysan weli caraatan bilaabin, sidii kal hore oo kale, laakiin haddana shaki kuma jiro in siyaasadda labada hoggaamiye ay hadda gaartay meel adag, ama ay qarka u saarantahay marxalad keeni kara iskahorimaad cusub.
Iskahorimaadka la saadaalinayo ayaa loo aaneynayaa isfaham miiska hoostiisa ah oo labada hoggaamiye kaliya ku dhexmaray kulankoodii Singapore ee 12 Juun 2018. Sida maalmahaan la soo warinayo, Trump waxa uu ballanqaad afka ah Kim ka ballanqaaday in Mareykanku uu soo afjarayo collaadda raagtay ee dagaalka Kuuriya, oo sharciyan ah mid aan weli dhammaan iyo marxalad dagaal oo taaganyd illaa iyo 1950-kii. Trump weli ma uusan oofin ballanqaadkaas.
Sidoo kale, Trump ayaa filayey in hormar laga gaaro ballanta Kuuriyada Waqooyi ee ahayd baabi’inta hubkeeda nukliyeerka. Meeshii taas laga sugayeyna, waxaa muuqda sansaan in Kim uu sii xoojinayo hubkiisa nukliyeerka.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka oo ay hore ugu qorsheysnayd in uu safar ku tago Pyongyang ayaa isna si lama filaan ah waxa uu u baajiyey safarkii Kuuriyada Waqooyi. Baajinta safarka Xoghayaha ayaa salka ku haysa warqad kulul oo uga timid Kuuriyada Waqooyi, ayna ku goodinayaan in “haddii Mareykanku uusan ballantiisa ka dhabeyn ay sii wadayaan tijaabada hubka nukliyeerka.”
Jim Mattis, Xoghayaha Difaaca Mareykanka, ayaa isna isla abuucaan dabka dheereeyey, asaga oo ku goodiyey in Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay dib-u-bilaabi doonaan dhoolatusyadii milateri ee gacanka Kuuriyada, ayaga oo intii hore ka sii mug weyn.
Xiriirka sii xumaanaya ee labada hoggaamiye oo hadda galay marxal “anaa ka qori weyn” ayaa haddii uu Mareykanku dib-u-bilaabo dhaqdhaqaaq milateri keeni kara isfahamwaa iyo cabsi dhanka Kuuriyada Waqooyi, taas oo iyana sababi karta in Kim uu badda Bacifiga nukliyeer ku dul qarxiyo. Sidoo kale, hore ayaa Kuuriyada Waqooyi ugu goodidey in ay saldhigga milateri ee Mareynkanka ee Guam gantaalo la beegsan doonto.
Waxaa xusid mudan in marnaba uusan dhaqangelin heshiis waara oo dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Kaba sii daran e, marxaladda gobolka oo dhan baa waxa ay isbadashay kaddib markii uu xumaaday xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya Mareynkanka iyo Shiinaha, sababeyna in Mareykanku uu tariifo dheeraad ah oo gaaraysa 25% saaray boqollaal bilyan oo badeecooyinka Shiinaha ah. Shiinaha ayaa sidoo kale yeelay, welina dagaalka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinuhu waa uu socdaa.
Kuuriyada Waqooyi oo dhaqaale ahaan ku xiran Shiinaha, ayaa hadda u muuqata saaxiib ka agdhow Shiinaha, kana horimaananeysa dhammaan dalabaadka Mareykanka iyo wax kasta oo uusan Shiinuhu raalli ka aheyn.
Mareynkanka iyo Shiinuhu ganacsi kaliya iskuma hayaan ee waxaa kaloo la isku hayaa jasiiradaha hubeysan ee gacan-ku-sameyska ah ee Shiinuhu ka dhisay Badda Shiinaha. Jasiiradahaas ayaa Mareykanku waxa uu arkaa xeelad cusub ee Shiinuhu la yimid, gobolka oo dhanna kaga cayrsanayo Mareykanka. Istaraatajiyada Shiinaha ee kahortagga Mareykanka ayaa lagu macneeyaa in ay tahay tallaabooyin yaryar oo isdabajooga, muhiimadooduna tahay in uu daaliyo Mareykanka, muruq iyo maalba, illaa uu Mareykanku gaaro heer ah in uu gobolka oo dhan ka guuro, una arko meel uusan difaaci karin.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 466 Wararka 18279